China JM23 JM26 Insulating FireBrick mpanamboatra sy mpamatsy |Topower
JM23 JM26 Insulation FireBrick
JM23 JM26 insulating firebricks dia feno tanimanga madio, polylight baolina sy ny fitaovana hafa mba hamorona rafitra masontsivana fanamiana.Aorian'ny famolavolan'ny extrusion dia alefa amin'ny hafanana ambony izy ireo.Ny faritra tsirairay amin'ny biriky dia voapoizina amin'ny mekanika amin'ny habeny ilaina. Ireo biriky ireo dia manana lanjany maivana ary afaka miasa amin'ny toe-javatra mafana.
JM23 JM26 Insulation FireBricks mametraka alumina ho fitaovana fototra. Ny biriky alumina insulation maivana dia mampiasa akora tsy ara-organika ho fatiantoka amin'ny fandoroana mba hampitomboana ny porosity amin'ny fitaovana refractory. Ny firebrick insulation dia afaka mampihena ny vidin'ny fototra, mampihena ny fizaràna cross-fizarana, ary mamonjy ny simenitra nohamafisina dia afaka mitahiry be ny vidin'ny trano.It'sa ilaina refractory biriky ho antsika mba hampiasaina amin'ny isan-karazany ny lafaoro toy ny simika indostria, fitaratra fandrefesana sy ny sisa.Ireo Insulating FireBricks manao tsara amin'ny angovo mitsitsy sy ny hafanana fitehirizana.Ny fandeferana ny mari-pana dia avy amin'ny 1300 ny 1400 degre.
JM23 JM26 Insulation FireBricks dia manana ny toetran'ny fitehirizana hafanana avo, kalitao tsara ho an'ny faharetana maharitra, ny hamafin'ny mekanika avo lenta, ny insulation mamonjy angovo lehibe ary ny herin'ny famotehana mangatsiaka.
Maivana JM23 JM26 insulation biriky azo ampiharina mivantana amin'ny refractory linings na insulation sosona, ary azo ampiasaina ho toy ny fanoloana ny mari-pana ambony lafaoro burner brackets, burner fanamboarana biriky sy maivana burner biriky.Azo ampiasaina be dia be amin'ny tava mafana refractory soson'ny na ho toy ny backup insulation fitaovana toy ny hafanana ambony fanodinana metaly, petrochemicals sy seramika.
Herin'ny famotehana mangatsiaka (MPa)
Famoahana tsy tapaka
Porosity hita maso (%)
4. Apetraho ao anaty lafaoro tonelina ny biriky mba ho may.
5. Atsipazo ny biriky.
teo aloha: Plate fampidirana alumina tsy misy bala